नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्डबीचको ट्राई सिरिज स्थगित |
नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्डबीचको ट्राई सिरिज स्थगित
२०७६, १३ चैत्र बिहीबार १२:५० March 26, 2020 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण अहिले विश्व खेलकुद नै प्रभावित बनेको छ । टोकियो ओलम्पिकदेखि युरो २०२० सम्मका खेल स्थगित भइसकेको छ । यस्तै वर्ष २०२० मा भइरहेको र हुने तय भएको धेरै खेल प्रतियोगिता कुनै रद्ध भएका छन् भने कुनै स्थगित भएका छन् ।
यसै क्रममा सन् २०२३ को आईसीसी ओडीआई वर्ल्डकप क्रिकेटको रोडम्यापको रुपमा रहेको विश्वकप लिग २ अन्तर्गतका ट्राई सिरिज पनि स्थगित भएका छन् । आईसीसीले अर्को निर्णय नभएसम्म वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जुन ३० सम्मको सबै प्रतियोगिता स्थगित गरेको जनाएको छ ।
अप्रिलमा अमेरिकामा हुने तय भएको ट्राई सिरिज यसअघि नै स्थगित भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेकोले अरु थप सिरिज पनि स्थगित गरेको हो । जसमा नेपालले खेल्ने दुई सिरिजसमेत छन् ।
अप्रिल २० देखि २७ सम्म नामिबियामा हुने तय भएको नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्डबीचको ट्राई सिरिज स्थगित भएको हो । यस्तै ९ देखि १६ जुनसम्म पपुपा न्युगिनीमा हुने तय भएको नेपाल, पपुवा न्युगिनी र युएईबीचको ट्राई सिरिज पनि स्थगित भएको छ । यस्तै सन् २०२१ मा हुने आईसीसी टी २० वर्ल्डकप अन्तर्गत ६ रिजन क्वालिफाइङ इभेन्ट पनि आईसीसीले स्थगित गरेको छ ।
आईसीसीले खेलाडी, अफिसियल स्टाफको सुरक्षा र स्वास्थ्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको भन्दै यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ । आईसीसीले अन्य सिरिजहरुको समेत मनिटरिङ गरिरहेको जनाएको छ ।
२०७६, २४ चैत्र सोमबार २०:११
खुसिको खबर !! टी ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट निर्धारित समयमा नै हुने आइसीसीको प्रष्टोक्ति
२०७६, २४ चैत्र सोमबार १२:१५
नेपाली टिमले भारतिय कोच पाउँने पक्का ! संम्भवत: यी हुनेछन् नयाँ कोच
२०७६, २३ चैत्र आईतवार १३:४६
महामारीको बेला दिल्ली क्यापिटल्सले सम्झियो सन्दीपलाई